Kpọtụrụ Anyị - Gemological Institute of Cambodia
Gemological Institute nke Cambodia (GEMIC Laboratory Co., Ltd.)
Street Market Night, Siem Reap, Cambodia
Ajụjụ ndị ọzọ?
Biko kpọtụrụ anyị
GEMIC na-echegbu onwe ya gbasara nchekwa na nchekwa nke ndị ahịa anyị. Anyị na-ahụ na usoro azụmahịa anyị dị oke mma yana ozi ndị ahịa anyị echedoro.
Maka ajụjụ ọzọ
Biko kpọtụrụ anyị.
I nwere ike ịtụ a akwụkwọ mgbe ị na tinye otu ihe na gị cart. Iji mee nke a, Pịa njikọ "tinye akwukwo di mkpuru maka ihe a" na ihe nkowa page n'elu "tinye na ụgbọ ibu" button. Nke a ga-emeghe akwụkwọ nhọrọ.
Nkume ọ bụla dị na GEMIC bụ mkpuru okike nke ụwa. Anyị na-adịghị obibi na sịntetik ma ọ bụ ụlọ nyocha-kere "bara nnukwu uru".
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ na iwu
Pịa "nọgide na ndenye ọpụpụ" wee tinye adreesị mbupu gị.
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ gị wee pịa "kwụọ ụgwọ ugbu a".
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ chọọ ịtụle nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nchịkọta niile sitere na GEMIC gụnyere akwụkwọ ọnụahịa zuru ezu. Biko kpọtụrụ anyị tupu ịtụkwasị iwu gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ọnụahịa ahaziri ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa ọ bụla.
Acha mara mma nke oke nkume
VVS : Fọrọ nke nta loupe dị ọcha - dị nnọọ obere inclusions; inclusions sonso hụrụ n'okpuru 10x magnification.
I : Gụnyere - a na-eji anya na-ahụ anya gụnyere ya.